Arsenal oo markale diirada saaratay daafaca Roma ee Kostas Manolas – Gool FM
Arsenal oo markale diirada saaratay daafaca Roma ee Kostas Manolas
Liibaan Fantastic August 24, 2016
(London) 24 Agoosto 2016 Kooxda Arsenal oo baadigoob ugu jirta daafac ayaa markaana diirada saaratay daafaca kooxda Roma ee Kostas Manolas.
Indha indheeyayaasha kooxda Arsenal ayaa la sheegay inay daawadeen kulankii Champions League ee u dhexeeyay kooxaha Roma iyo FC Porto, waxaana la rumaysanyahay in qorshohoodu uu ahaa Kostas Manolas sida ay baahisay DailyMail.
Arsenal ayaa baadigoob ugu jirta daafac dhexe kadib markii ay dhaawacmeen Per Mertesacker iyo Gabriel Paulista, tababare Wenger ayaana diirada saartay daafaca Valencia ee Mustafi kaas oo ay ilaahaatan ku fashilmeen dhamastirka saxiixiisa.
Tababaraha kooxda Valencia ayaa u sheegay Arsenal in Mustafi uusan iib ahayn taas ayaana ku riixaysa kooxda macalin Wenger inay u dhaqaaqaan Kostas Manolas oo diirada u saarnaa Gunners 2-dii sano ee la soo dhaafay.
Liverpool oo ku soo biirtay tartanka saxiixa James Rodriguez (Imisa ayeey ku doonaysaa?)
GOOGOOSKA: Manchester City vs Steaua Bucuresti 1-0 (6-0)